Ukungenisa kushushu kuyila kunye nokwenza iinkqubo eziluncedo
Ukuchithwa okuShushu kusenziwa kunye neNkqubo yokuQhuba
Induction Hot ukwakha yinkqubo ekwenziweni kwezinto zokubopha kwimizi-mveliso ezinje ngeebholithi, izikrufu kunye neeriveti. Ubushushu busetyenziselwa ukuthambisa isinyithi esihlala siyiphepha, ibha, ityhubhu okanye ucingo kwaye emva koko uxinzelelo lusetyenziselwa ukutshintsha ubume besinyithi ngokwenza nayiphi na le misebenzi ilandelayo: isihloko eshushu, ukungabinanto, ukubetha, ukubopha, ukubhoboza, ukusika , ukucheba okanye ukugoba. Ngaphandle koko, ukufudumeza i-billet ikwayinkqubo efanelekileyo eyenziwa ngoyilo olushushu.
Ukufudumeza kwamhlanje ukubonelela ngezibonelelo ezininzi kunezinye iindlela zokufudumeza kwaye zihlala zisetyenziselwa izicelo zokubopha. Ukufudumeza ngokungeniswa kunika ubushushu obunokuthenjwa, obunokuphindaphindwa, obungadibaniyo kunye namandla afanelekileyo ngexesha elincinci. Ukutshisa ukutshisa ikwalungele iinkqubo zemveliso ezi-in-line ngenxa yokuba ikwazi ukuvelisa imijikelezo yokuphindaphindwa, ekhawulezayo nechanekileyo yokufudumeza.
Hot Ndiyila nasekuqiniseni, Ukunyathela okushushu kunye nokukhutshwa kubandakanya ukuyila indawo ebifudunyezwe ngaphambili kwiqondo lobushushu apho ukuxhathisa kwayo kwi-deformation kubuthathaka. Amaqondo obushushu asondeleyo okwenza izinto ezisetyenziswa kakhulu zezi:
Isinyithi ukusuka kwi-1100 ukuya kwi-1250 ºC
Ubhedu 750 ºC
Emva kokufudumeza izinto, umsebenzi oshushu wokwenza wenziwa kwiindidi zoomatshini ezahlukeneyo: oomatshini bokuchaphazela oomatshini, oomatshini bokugoba, oomatshini bokushicilela be-hydraulic extrusion, njl.
Izinto zokuqala ezisetyenziswayo ekubumbeni ziboniswa ngohlobo lwee-studs ezijikeleziweyo, izikwere (billet) okanye izinto zebar.
Iziko lokubasa eliqhelekileyo (igesi, ipetroli) zisetyenziselwa ukufudumeza iinxalenye kodwa kwanokusetyenziswa kungenziwa.
Induction Ukufudumeza izibonelelo:
Izixhobo zokonga umbane kunye nokuguquguquka
Amaxesha amafutshane okufudumeza
I-oxidise encinci kunye nemveliso yesikali iphantsi kakhulu
Uhlengahlengiso olulula noluchanekileyo lobushushu obuza kusetyenziswa
Akukho xesha lifunekayo kwisithando somlilo ngaphambili kunye nokufudumeza ulondolozo (umzekelo emva okanye ngeempelaveki xa kuthatha ixesha elininzi)
Ukuzenzekelayo kunye nokunciphisa umsebenzi ofunekayo
Ubushushu bunokuhanjiswa kwindawo enye, ebaluleke kakhulu kwiindawo ezinendawo enye yokwenza
Ukusebenza kakuhle kobushushu
Iimeko ezingcono zokusebenza njengokuphela kobushushu obukhoyo emoyeni zezamalungu ngokwawo
Inkqubo ye nasekuqiniseni kunye eshushu bokwakha yinkqubo eqhelekileyo ekwenziweni kwamacandelo amaninzi emizi-mveliso anje ngezithuthi, umzila kaloliwe, iaerospace, ioyile kunye negesi, amatyathanga kunye nokwenza izinto.
iindidi Teknoloji tags ibha eshushu iyila, billets eshushu bokwakha, uthenge iziko elitshisayo, ku qulunqa, nasekuqiniseni umatshini, Ukwenza ishushu, Ukushisa kwexabiso lomlilo, Umatshini oshushu, Inkqubo eshushu yokwenza, ukuqulunqwa kokuqulunqwa, Ukungeniswa kwesithando somlilo, induction ekwenziweni kwexabiso lesithando somlilo, Ukwenza kushushu kushushu, ukuchithwa okutshisa isithando somlilo Post yokukhangela
ukususwa kwengubo yokususa ekususeni ipeyinti
Induction ethe nkqo kumgangatho kunye nezisombululo zokufudumeza ubuninzi